Mpanamboatra sy mpamatsy trano fitoeran-javatra - Orinasa mpanamboatra trano fitoeran-javatra ao Shina
Mametraka mora foana ny trano fonenan'entana 20FT any China ho amidy
PATENT EXCLUSIVE Ireo kaontenera azo ahodina dia nanao fanatsarana vitsivitsy noho ny tranon'ny kaontenera tsotra. Azo aforitra izy io mba hamonjy efitrano iray rehefa ampidirina anaty kaontenera fandefasana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny 40HQ iray dia afaka mamoaka kaontenera mivalona betsaka noho ny kaontenera mahazatra (5800x2450x2500mm ny habeny rehefa aforitra). Ary ny androm-piainany dia lava kokoa noho ny fitoeran'ny fonosana fisaka. Ity karazana kaontenera mivalona ity dia matetika ampiasaina ho trano ipetrahana noho ny vidiny mifaninana. Size 2500X5800X255 ...
Fonenana fitoeran-tavoahangy prefab mihalava azo aforitra trano fonosana
1.Ny tranon'ny fitoeran-kazo fitoeran'entana miorina ity dia natao tamin'ny taona 2010. Ny iray amin'ireo mpanjifanay dia mila toby fiasana an-terivozona. Nolazainy taminay fa lafo be ny vidin'ny asa any amin'ny fireneny ary tsy manana traikefa amin'ny fametrahana trano izy. Noho izany dia namboarinay ho azy ity trano ity. Ny trano mivalona dia azo aforitra ary hisokatra im-betsaka, ary azo apetraka mora foana ao anaty 10 minitra. Ny fitoeran-javatra aforitra efa vita mialoha dia vita amin'ny rafitra vy maivana sy tontonana sandwich f ...
Trano vaovao vita amin'ny paingotra Prefab mandehandeha ao an-trano misy trano kely kely
1.Ny fonosana fitoeran-kazo fitoeran'ny trano fitoeran-kaontenera dia ny insulateur, ny fireproof, ny tantera-drano, ny fasika, ny windproof ary ny shockproof ary ny toetra hafa. Mety hipetraka vetivety na maharitra izy io. Azo ampiasaina amin'ny birao, efitrano fianarana efitrano fitehirizana ary toy izany koa. Ny fefy vy nandrisika dia mateza sy manohitra paompy, ny rindrina sy ny tafo dia takelaka sandwich vy miloko, tsara amin'ny insulation, azo ampiasaina ihany koa izy any an-tany efitra, ahitra, snow-berg, amoron-dranomasina, tokony ho rehetra-weath ...
2 Min PrefabricatedPrefab Flat Pack Tiny Portable Mobile Garden Readymade Wooden Foldable Foldable CabinOfficeHouse
Ireo kaontenera azo ahodina dia nanao fanatsarana vitsivitsy noho ny tranon'ny kaontenera tsotra. Azo aforitra izy io mba hamonjy efitrano iray rehefa ampidirina anaty kaontenera fandefasana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny 40HQ iray dia afaka mamoaka kaontenera mivalona betsaka noho ny kaontenera mahazatra (5800x2450x2500mm ny habeny rehefa aforitra). Ary ny androm-piainany dia lava kokoa noho ny fitoeran'ny fonosana fisaka. Ity karazana kaontenera mivalona ity dia matetika ampiasaina ho trano ipetrahana noho ny vidiny mifaninana.
Trano fonosana fonenana efa voaorina efa an-trano 2 ho an'ny birao
1.Ass Assembly Container house Ny trano prefab dia karazana trano fitsinjovana angovo sy tontolo iainana vaovao. Izy io dia rafitra mitambatra vita amin'ny vy, izay azo atambatra sy hapetraka. Azonao atao ny misafidy ny tranokala fananganana sy ny faritra fananganana mifanaraka amin'ny zavatra ilainao. Mety amin'ny toerana misy azy eo amin'ny tehezan-tendrombohitra, havoana, faritra ahitra ary efitra. , Riverside. Io no fiasa miovaova sy azo ovaina amin'ny trano efa namboarina izay be mpampiasa tamin'ny FA ...
20ft 40ft fandefasana trano lafo vidy trano fonenana prefabricated amidy
1.Ass Assembly Container house Ataovy manokana ny serivisinao araka izay ilainao, misy loko isan-karazany azo atao arakaraka ny safidinao Araka ny filanao manome trano fidiovana, toerana fandroana Omeo serivisy maika arakaraka ny zavatra takinao apetraka amin'ny toerana rehetra, ary ny fizarazaran-trano dia azo apetraka amin'ny axis marindrano. Napetraka ety ivelany ny tohatra. Androm-piainana maharitra: ny firafitra vy rehetra dia voatsabo ...